သားလေးကို ဖိနပ်ဝယ်ပေးချင်လို့ အကြွေစေ့လေးတွေ နှစ်အကြာကြီး စုခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲသား အဖေ့မေတ္တာ
သားလေးကို ဖိနပ်ဝယ်ပေးချင်လို့ အကြွေစေ့လေးတွေ နှစ်အကြာကြီး စုခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲသား အဖေ့မေတ္တာ ဒီခေတ်ကာလကြီး ထဲမှာ ဖိနပ်လေး တစ်ရံ ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံကို နှစ်ချီ စုရတယ် ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားရင် ဘယ်သူမှ ယုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထူးဆန်းတာတွေ ကိုမှ ပရိသတ်ကို တင်ဆက် […]
အသက်(၃၄)နှစ်ကွာတဲ့ မင်္ဂလာပွဲရဲ့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရား
အသက်(၃၄)နှစ်ကွာတဲ့ မင်္ဂလာပွဲရဲ့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရား တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ တစ်ခုကို ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင် အဖေနဲ့ သမီး မင်္ဂလာဆောင်အတူတူ တက်လာလို့ APANNPYAY ပရိသတ်တွေ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းက မင်္ဂလာသတို့သားနဲ့ သတို့သမီးဖြစ်နေပြီး အမျိုးသားက အသက်(၆၂) နှစ် ၊ […]
ဓမ္မတာလာတဲ့ ကျောင်းသူကို ဆရာက အရှက်ခွဲပြီးနှင်ထုတ်ခဲ့လို့ ကျောင်းသူလေး သတ်သေ
ဓမ္မတာလာတဲ့ ကျောင်းသူကို ဆရာက အရှက်ခွဲပြီးနှင်ထုတ်ခဲ့လို့ ကျောင်းသူလေး သတ်သေ ဓမ္မတာလာတာဟာ မိန်းမတို့ သဘာဝပါ။ ဓမ္မတာလာတာလို့ပဲ ပြောပြော၊ ရာသီလာတယ်လို့ပဲ ခေါ်ခေါ်၊ ဥတုပန်းပွင့်တယ်လို့ပဲ ဆိုဆို ဒါဟာ သဘာဝတရားကြီးမို့ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ လောင်ပြောင်ဖို့ မသင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ ယဉ်ကျေးမှု မထွန်းကားတဲ့၊ အယူဝါဒသည်းလွန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒါဟာ […]
ဝင်းနဲ့ ဇော် လွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေအတွက် ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ကိုရဲမင်း (ACC) ပရိသတ်ကြီးရေ၊ မကြာသေးခင်က ဝင်းနဲ့ ဇော် လွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ACC က ကိုရဲမင်းက အဖြစ်မှန်ကို အခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ “သတင်းမှားပါတယ်.. 29-8-2019 ရက်နေ့က […]
ဝင်း နဲ့ ဇော်အတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ စာတစ်စောင်ရေးသားပေးပို့ အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
ဝင်း နဲ့ ဇော်အတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ စာတစ်စောင်ရေးသားပေးပို့ အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူသတ်မှုဖြင့်တရားဆွဲဆိုခြင်းခံထားရပြီး သေဒဏ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသော မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦး ဝင်းနှင့်ဇော်အတွက် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်စေရေးနှင့် မှန်ကန်သောတရားစီရင်ရေးဖြစ်စေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ စာတစ်စောင်ပေးပို့၍ အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည် …. ။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ တိကျမှန်ကန်သောအဖြေရရှိရေးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာတို့ကိုမြှင့်တင်စေလိုပါက […]
အိမ်မှာနေတဲ့ ဇနီးသည် ရဲ့ ဘဝကို CCTV တပ်ပြီးမှ သိခဲ့ရတဲ့ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူရဲ့ အဖြစ် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အိမ်ထောင် ဦးစီးဖြစ်တဲ့သူ အများစုဟာ အိမ်ရှင်မ ဖြစ်တဲ့ မိန်းမကို အထင်မကြီးကြသူတွေ များပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်အထင်မှာ ယောင်္ကျားလုပ်သူက အပြင်မှာ နေပူ (သို့) […]
အကိုနှစ်​​ယောက်​က ညီမအရင်းကို အကြိမ်​ကြိမ်​သားမယားပြုကျင့်​ပြီး ကိုယ်​ဝန်​ရ​သောအခါ …
အကိုနှစ်​​ယောက်​က ညီမအရင်းကို အကြိမ်​ကြိမ်​သားမယားပြုကျင့်​ပြီး ကိုယ်​ဝန်​ရ​သောအခါ … မိသားစုတိုင်းမှာ ​သွေးသားရင်းခြာ​မောင်​နှမ​တွေဆိုတာ အပြန်​အလှန်​ကာကွယ်​​စောင့်​​ရှောက်​ရင်း ဂရုစိုက်ကြ​​ဖို့သာ ဖြစ်​​ပေမဲ့ တခါတရံ မှာလဲ မယုံကြည်​နိုင်​စရာ​ကောင်း​လောက်​တဲ့ ကံကြမ္မာဖြစ်​ရပ်​ဆိုး​တွေဟာ ထင်​မှတ်​မထား​လောက်​​အောင်​ကို ဆန်းကြယ် ​လွန်းလှပါတယ်​ …။ News Straits Times သတင်းစဉ်​ရဲ့​ဖော်​ပြချက်​အရ အသက်​ ၁၃ နှစ်​အရွယ်​ […]
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုတွင် သေဆုံးသူ ဒေးဗစ်၏ဖခင်က သေဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်းကို သဘောမတူကြောင်း ပြောဆိုခဲ့
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုတွင် သေဆုံးသူ ဒေးဗစ်၏ဖခင်က သေဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်းကို သဘောမတူကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ “လိပ်ကျွန်းအမှုရှေ့နေအဖွဲ့၏မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုချက်” လိပ်ကျွန်းအမှုတွင် ဇော်လင်းနှင့်ဝေဖြိုးတို့ဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ထိုင်းနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီမှ ရှေ့နေကြီး မစ္စတာနခေါ် ချုမ်ဖူချာ့ က အောက်ပါကဲ့သို့ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုလာပါသည် ..။ သေဒဏ်စီရင်ခံရသော ဇော်လင်းနှင့်ဝေဖြိုးတို့အတွက် ပြစ်ဒဏ်များလျှော့ပေါ့ပေးရန် ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ထံသို့ အသနားခံလျှောက်လွှာ တင်ရမည်ဖြစ်ပါသည် …။ […]
ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထွက်လာတဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Kris
ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထွက်လာတဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Kris EXO အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Kris ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ C-Pop အနုပညာရှင်အဖြစ်နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနေတဲ့ နာမည်ကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် …။ သူကတော့ ဒီကနေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာ ထွက်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ နာမည်အကြီးဆုံး […]
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာ မြန်မာလူငယ် နှစ်ယောက်အတွက် မြန်မာHacking အဖွဲ့တွေ ပါဝင်ကူညီတော့မယ် ဝင်းနဲ့ဇော်လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာ မြန်မာလူငယ် နှစ်ယောက်ကို တရားခံဖြစ်ကြောင်း သတ်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ လေးနှစ်ကြာဖမ်းစီးထားပြီးနောက် ယနေ့နောက်ဆုံးအယူခံကို ထိုင်းအစိုးရကပယ်ချကာ သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်…. .. စတင်ဖမ်းစီးခံရစဉ်ထဲက အစိုးရရော မီဒီယာများပါ ဝင်းနဲ့ဇော်အတွက် မတရားတဲ့ ပစ်ဒဏ်တွေအတွက် ဖော်ပြခြင်း ကာစီးပေးခြင်း ကာကွယ်ပေးခြင်း […]